Santoku Linux: iyo distro yekuongorora kwema mobile | Linux Vakapindwa muropa
SantokuLinux es mugove kuti pamusoro pekudaidzwa kunodiwa banga reJapanese kuvabiki vazhinji, zvakare chishandiso chakakosha kune avo vanofanirwa kudzidzira kuongororwa kwechengetedzo pane nharembozha. Rudzi urwu rwekuongorora rwuri kuwedzera uye kuwedzera kwekushandiswa kwerudzi urwu rwezvinhu uye kune izvi kune iyi distro.
Santoku Linux, pamwe ne Kali Linux uye DEFT Linux, ndidzo nhatu dzezviridzwa zvine simba kwazvo pakuongorora. NeSantoku Linux isu tinofukidza chikamu chemafoni uye matafura, kunyange chiine mamwe maturusi. Kana iri yeKali inozivikanwa, yakakwana kwazvo uye yakanangana nepentesting, asi zvakare ine maturusi ekuongorora kuongorora, kuferefetwa kwenhare, nezvimwewo zvinogona kuitwa. Chekupedzisira, DEFT Linux yakanyatsogadzirirwa kuongororwa kwehunyanzvi.
Zvikamu zvitatu zvine hunyanzvi izvo zvinotitadzisa kutora nekuisa mapakeji emabasa aya ane chekuita nekuchengetedzwa kwekombuta. Vanounza zvese zvaunoda uye nezvimwe ... Vamwe venyu mungafunge kuti imwe chete yaizokwana, inyaya yekuravira. Asi kwandiri zviri nani kushandisa imwe neimwe yavo mumunda mavo mavakasarudzika.
Kudzokera kuSantoku Linux, protagonist wenyaya ino, taura izvozvo inosanganisira zvikamu zvitatu zvakakosha: forensic ongororo yakanangana nemidziyo yemafoni (ine huwandu hwakawanda hwemifananidzo yeOS, maturusi ekuongorora kweROM, RAM, ...), malware ongororo pane nharembozha uye pakupedzisira ongororo yekuchengetedza pazvinhu izvi. Uye zvese zvacho kurodha pasi kubva kune webhusaiti yeprojekiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Santoku Linux: iyo GNU / Linux kugoverwa kwema mobile audits